Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Boil မွေးကျွတ်နာ
3 Sep 10, 20:37
အမွေးကျွတ်နာက မှိုကြောင့်ဖြစ်တာလား ဆရာ။ ဘာဆေးတွေ လိမ်းသင့်လဲဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဦး။
မွေးကျွတ်နာ ကို အနာစိမ်းလို့လဲ ခေါ်တယ် အင်္ဂလိပ်လို Boil ခေါ်ပြီး ဆေးစာလို Folliculitis ခေါ်တယ်။ အရေပြားထဲက Follicle မွေးညင်းပေါက်တွေကို ပိုးဝင်လို့ ခေါ်တာပါ။ ဒါကိုဖြစ်စေတဲ့ ပိုးအမျိုးအစားဟာ ဗက်တီးရီးယား Staphylococcus Aureus ဖြစ်တယ်။ အဲလို အနာလေးတွေ စုဝေးပြီး ပေါင်းစပ်တဲ့အနာ ဖြစ်လာရင်တော့ Carbuncle အနာပဆုပ် (ဖတ်ရင် အနာ့ပဆုပ်) ခေါ်တယ်။
သိပ်နာတယ်။ ရောင်နေမယ်။ ရဲနေမယ်။ ပူနေမယ်။ ပြည်ဖြစ်လာတယ်။ အရွယ်အစာ သေးသေးလေးကနေ ဆီးဖြူသီး လောက်အထိ ရှိနိုင်တယ်။ ဘေးက အရေပြာလည်း နီပြီး ရောင်နေမယ်။ အနာရဲ့အလယ်ထိပ်မှာ ဖြူဝါဝါ အရောင်လေး မြင်ရတာ ပြည်တည်နေလို့။ ဒါဆို ပြည်ကို ခွဲထုတ်ပေတော့။ တချို့ ဖျားမယ်။ ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ Lymph nodes တက်စေ့တွေ ရောင်မယ်။ မပျောက်နိုင်ရင် နာတာရှည်အနာ ဖြစ်လာမယ်။
ဆီးချို၊ အဝလွန်တာ၊ အစာအာဟာရ နည်းတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ အနာပဆုပ်ပေါက်ရင် ဆီးချို ရှိ-မရှိ စစ်ပါလေ။ တချို့ပြင်းတဲ့ဆေး ပေးနေတုံးလည်း ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ အနာပေါ်မှာ ဆားရည်ပူပူ၊ ဆားမီးပူတိုက်တာ တင်ပေးရင် ခံရတာ သက်သာပြီး ပြည်မြန်မြန်မှည့်တယ်။ နောက်ဆုံး ပြည်ကို ခွဲထုတ်ရတာပါဘဲ။
Antibiotic ပဋိဇီဝဆေး ပေးရမယ်။ ဒီပိုးကို နိုင်တဲ့ဆေး ရွေးတတ်ရမယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေကို နိုင်တာ သိတဲ့အတိုင်း ပနယ်စလင်တွေဘဲ။ ဒါပေမဲ့ မွေးကျွတ်နာ ဖြစ်စေတဲ့ အကောင်အတွက် Antistaphylococcal Penicillins ဆိုပြီး သပ်သပ် ရှိတယ်။ Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin နဲ့ Nafcillin တို့ ဖြစ်တယ်။
• အသက်ရှူလမ်း အပေါ်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း = 250 mg every6hours for7to 14 days (Maximum4g/day)
• နူမိုးနီးယား = 500 mg every6hours for up to 21 days (Maximum dose:4g/day)
• အရေပြားအနာများ = 500 mg every6hours for7days (Maximum dose:4g/day)
• ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း = 250 mg every6hours for3to7days (Maximum dose:4g/day)
• လေပြွန်ရောင်ခြင်း = 250 to 500 mg every6hours for 10 days
• အာခေါင်ရောင်ခြင်း = 250 mg every6hours for 10 days
• နူမိုးနီးယား = 500 mg every6hours for up to 21 days
• အရေပြားအနာများ = 500 mg every6hours for7days
• အသက်ရှူလမ်း အပေါ်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်း = 250 mg every6hours for7to 21 days
• အသင့်အတင့်ဆိုးတဲ့ ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း = 250-500 mg I.V. every 4-6 hours
• ဆိုးဝါးတဲ့ ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း = 1 gram I.V. every 4-6 hours
• အရေပြားအနာများ = 1 to2g IV every4to6hours for7days
• Abscess ခူနာ ခေါ်သော ပြည်တည်နာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/04/blog-post.html